micro SIM (သို့) nano SIM သို့ပြောင်းရန် SIM ကဒ်ဖြတ်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
micro SIM သို့ nano SIM သို့ပြောင်းရန် SIM ကဒ်ဖြတ်နည်း
ယနေ့များစွာသော စမတ်ဖုန်းများ micro SIM သို့မဟုတ် nano SIM ကဒ်ကိုသုံးပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မှာ SIM ကဒ်အသေးစားပါတဲ့ဖုန်းရှိတယ်၊ နောက်ဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ terminal အသစ်ကသေးငယ်တဲ့ကဒ်အမျိုးအစားကိုသုံးတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တတ်တယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရလိမ့်မည် sim card ကိုဖြတ်ယူပါ အသေးငယ်ဆုံးအရွယ်အစားကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်။
ကောင်းပြီ၊ အမြဲတမ်းဖြေရှင်းနည်းတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒ်အသစ်ကိုမလာနိုင်ရင်ငါတို့ကဒ်အသစ်ကိုရောက်လာတာကိုမစောင့်နိုင်ရင်အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SIM ကဒ်ကို micro SIM အဖြစ်ပြောင်းပါ သို့မဟုတ် nano SIM က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်တောက်သည်။
2 SIM ကဒ်အမျိုးအစားများ
3 Micro SIM သို့မဟုတ် Nano SIM သို့ပြောင်းလဲရန် SIM ကဒ်ကိုဖြတ်နည်း
3.1 ကျွန်တော်တို့ SIM ကတ်ကိုဖြတ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်
4 အနာဂတ် SIM ကဒ်များ
SIM Card ကိုမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ချေသုံးခုပဲရှိတယ်။
တတ်နိုင်သည့်တည်ထောင်မှုတစ်ခုသို့သွားပါ ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ထပ်လုပ်ပါ။ ကဒ်ကိုပွားနိုင်သောစက်ရုံများရှိသည်။ အနည်းဆုံးငါနေတဲ့နေရာမှာများများစားစားမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးကပလပ်စတစ်နည်းတဲ့ကဒ်ပြားတခုပေါ်မှာမူရင်းကိုယူပြီးကော်ပီကူးဖို့ပဲ။ ကဒ်သည်မူရင်းနှင့်အတူတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကတည်ထောင်မှုပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းမှာကွဲပြားလိမ့်မည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တရားဝင်တည်ထောင်ခြင်းကိုသွားနှင့် အသစ်တစ်ခုကိုမှာထား။ ကျွန်ုပ်တို့အနီးရှိကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာတစ်ခုတည်ထောင်ထားပါကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာဤအရာဖြစ်သည်။ အချို့သောကုမ္ပဏီများတွင်ကဒ်အသစ်တစ်ခုတောင်းခံခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ယူရို ၆ မှ ၁၀% အကြားကွာခြားနိုင်သည်။ Pepephone တွင်ဥပမာအားဖြင့်ပထမပြောင်းလဲမှုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပါက nano SIM ကိုတောင်းခံပြီး၊ လိုအပ်ပါက micro SIM သို့မဟုတ် mini SIM သုံးသောဖုန်းများတွင် adapter ကိုသုံးပါ။
အော်ပရေတာကိုခေါ်ပါ အခြားကဒ်ပို့ရန် ဒီရွေးချယ်မှုကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ။ ၎င်းသည်ယခင်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ကိုအိမ်သို့ပို့လိမ့်မည်။ တင်ပို့ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကဒ်မဟုတ်ပါ။
SIM ကဒ် (1FF)။ ဒီကဒ်ကိုယနေ့ရှာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ အနှစ်တစ်ထောင် သူတို့အပန်းဖြေနေကြသည်။ မူလ SIM ကဒ်သည်ကဒ်အလွတ်ဖြစ်ပြီးခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်တူညီသည်။
မီနီဆင်းမ် (2FF)။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်ပုံမှန်အရွယ်ဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသော SIM ကဒ်နှင့်ချစ်ပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပလပ်စတစ်အများဆုံးရှိသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
micro SIM (3FF)။ ဒီကဒ်ကို iPhone က ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ SIM ကဒ်ထက်အနည်းငယ်သေးငယ်တယ်။
နာနို SIM (4FF)။ iPhone5ရောက်ရှိလာချိန်တွင် Apple က micro SIM ကတ်ကိုထပ်မံဖြတ်တောက်နိုင်တော့မည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် nano SIM ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Micro SIM သို့မဟုတ် Nano SIM သို့ပြောင်းလဲရန် SIM ကဒ်ကိုဖြတ်နည်း
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် သင်၏ SIM ကဒ်ကို micro SIM သို့မဟုတ် Nano SIM သို့ပြောင်းလဲပါ။ ကိစ္စရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာပေါ် မူတည်၍ ဖြတ်တောက်ခြင်းမျဉ်းအချို့သို့မဟုတ်အခြားသူများကိုမှတ်သားရမည်။
ကျွန်တော်တို့ SIM ကတ်ကိုဖြတ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်
၎င်းတို့သည် SIM ကတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတိတိကျကျဖြတ်တောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိသည်ပြီးတာနဲ့ SIM ကဒ်ဖြတ်ရန်ပစ္စည်းများဤနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် download template ကို အသေးစား SIM ကဒ်တစ်ခုကို micro SIM သို့မဟုတ် nano SIM သို့ချုံ့ရန်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် ဒီ link ကနေ.
ကျနော်တို့ template ကို print ထုတ်.
စိတ်ထက်သန်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုဖြင့် ကျွန်တော်တို့ SIM ကဒ်အသေးစားကိုပြင်ဆင်ပါပြီ သင်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း template ပေါ်မှာ။
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမျဉ်းကြောင်းနှင့်အမှတ်အသားကိုယူမယ် ကျနော်တို့ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုင်းများ mark။ ဤအချက်မှာလိုင်းများသည်ပြင်ပကိုဖြတ်သန်းသွားရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အကျွံဖြတ်တောက်ပြီးကဒ်ပြားသည်အထောက်အပံ့အပေါ်ဆက်သွားပါမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှော့။ လျှော့ပါက၎င်းကိုချုံ့ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဖိုင်တင်နိုင်သည်။
ကဒ်ပြားကိုမှတ်သားထားပါက၊ ချုံ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်မှာ၎င်းကိုပထမ ဦး ဆုံးရှုးဖြင့်မှတ်သားရန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကိုကောင်းစွာအမှတ်အသားပြုသည့်အခါကတ်ကြေးနှင့်အဆုံးသတ်ပါ။ သင်ပိုမိုတိကျစွာလိုချင်လျှင်အဆင့် ၄ တွင်ရှိသောအုပ်ထိန်းသူကိုဖြတ်စက်ဖြင့်ပင်အမှတ်အသားပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ချစ်ပ်မှတစ်ခုခုကိုဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်သော်လည်းစိတ်မပူပါနှင့်၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ငါတို့ကွမျးတမျး file။ ဤအချက်မှာ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမီမည့်နေရာတွင်အထောက်အပံ့ရှိရန်အရေးကြီးသည်။ အကြံအစည်ကဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးအထောက်အပံ့ထဲ ၀ င်ပုံကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝင်ရောက်ခြင်းပြီးဆုံးခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ် ထပ်မံ၍ ဖိုင်တင်နိုင်သည် သို့သော်၎င်းသည်အသံကျပုံပေါက်ရုံမက၎င်းကို ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်သည့်အပိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့သေချာအောင်လုပ်ရန်လိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပိုင်းကိုစတင်ပြီး၎င်းနှင့်မကိုက်ညီပါကကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုပထမအကြိမ်ထပ်မံမဖြည့်သွင်းမီကျန်အပိုင်းများကိုဖိုင်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါတို့မှာရှိပြီးသား SIM ကဒ်ကို Micro SIM သို့မဟုတ် Nano SIM သို့ပြောင်းသည် iPhone အသစ်ကိုခံစားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာနှင့်ဖျန်ဖြေရန်မလိုပဲ။
အနာဂတ် SIM ကဒ်များ
မျိုးသုဉ်း။ အက်ပဲလ်ကစတင်ပြီးဖြစ်သည် AppleSIM iPad Air2နှင့်အတူတကွဤ "မြုံ" သောကဒ်ကိုမည်သည့်အော်ပရေတာနှင့်မဆိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီများပြောင်းသောအခါကဒ်များကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်မဟာဗျူဟာမြောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်၊ Tim Cook ဖွင့်လှစ်သောကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကွဲပြားနိုင်သည် - လူသိများသည့်အရာအတွက်လမ်းပြင်ဆင်ရန် ဟုတ်တယ်.
e-SIM ဆိုတာဘာလဲ။ ကောင်းပြီ ကဒ်ပျောက်ဆုံးမှု သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဝင်ရောက်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ e-SIM ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -
Apple SIM ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအော်ပရေတာများအကြားပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူစေသည်။
ပျက်ပြားမှုများကိုရှောင်ပါ။ အထူးသဖြင့်၎င်းနေရာမှအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖယ်ရှားခံရလျှင် SIM ကဒ်ပြိုကွဲလေ့ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကိုဘလော့ဂ်မှတ်တမ်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်၊ ဒီထဲမှာပါ ၀ င်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်တယ် SIM ကဒ်ဖြတ်ရန်လမ်းညွှန် ၎င်းကို mini SIM မှ micro SIM သို့ပြောင်းပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » micro SIM သို့ nano SIM သို့ပြောင်းရန် SIM ကဒ်ဖြတ်နည်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ပရေတာကိုမိုက်ခရိုဆမ်ကိုပေးခိုင်းတာဟာမလွယ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အကယ်စင်စစ်သူတို့ကသူတို့ကအိုင်ပက်အဘို့ဖြစ်၏ချက်ချင်းအနံ့ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကသာအိုင်ပက်များအတွက် fuck ဆိုတဲ့နှုန်းကို၏အခြေခံပေါ်မှာငါတို့အားပေးကြ၏။
Aurelio Gonzalez Flores ဟုသူကပြောသည်
Aurelio Gonzalez Flores သို့ပြန်သွားပါ
Jaime, သင်ကိုးကားစရာ microsim မလိုအပ်ပါ။ တိုင်းတာခြင်းအတိအကျနှင့်သင့်အားဤ link ကိုချန်ထားပါသည်။ ငါသည်ဤလမ်းညွှန်နှင့်အတူသတ္တုတွင်းဖြတ်ကြောင့်အကြီးအသွား
buksom, သင် xD link ကိုမေ့သွားတယ်။ သင်တတ်နိုင်လျှင်ချရေးပါ၊ ဒါကြောင့်ငါဖြည့်စွက်ရန်လမ်းညွှန်တွင်ထည့်ပါ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
ပြီးပြည့်စုံသောသင်ကြားမှုအားလုံး၏အကောင်းဆုံး။ "အခမဲ့" iPhone4ကိုပြင်သစ် Apple စတိုး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၀၀ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မနက်ဖြန်အထိကျွန်ုပ်ဝယ်ခဲ့သောကုန်သည်ဆီသို့ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းသစ်ကိုမသုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်ပေမယ့်ဒီသင်ခန်းစာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကတ်ကြေးနှင့်သာမိနစ်နှင့်!
စကားမစပ်၊ တိုင်းတာမှုများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိနိုင်သည် - Proyectoaurora.com/microsim-ipad/
မင်္ဂလာပါ၊ အကယ်၍ ထိုက်တန်လျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သိချင်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။
ငါအဟောင်းနှင့် disused sim အဖြစ်စမ်းသပ်မှုအဖြစ်ဖြတ်နှင့်ငါ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ဆောင်မှုမပါဘဲ .. ) ကပြီးပြည့်စုံသောအသိအမှတ်ပြုရန် iphone4 ရတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်အခြား terminal တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ထားရှိသော sim ကောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီး BAD ကို ဖြတ်၍ "I uped up" လုပ်လိုက်သည်။ iphone ကထိုအရာကိုမသိခဲ့ပါ။
Chip ကို circuit နဲ့အတူမကောင်းတဲ့ချုံ့ထားတဲ့ card တစ်ခုမှကောင်းမွန်စွာချုံ့ထားသည့် card တစ်ခုအနေဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ဂရုစိုက်ပြီး cutter ၏အကူအညီဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ IT သည်မည်သည့်အိမ်လုပ်လှည့်စားမှုများမှအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။
သတိထားပါ၊ ဤအလုပ်မလုပ်ပါ၊ Vodafone sim နှင့်စစ်ဆေးသည်။ sim သည်အထူးဖြစ်ရန်လိုသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Movistar မှယနေ့နှင့်အတူပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
Tx, သင်အခုအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ငါ iPhone ကိုအကြိမ်များစွာပြန်ဖွင့်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ် ... လိုက်တယ်လိုက်တယ်
အလို!!! အဆင်ပြေတယ်!!!! ငါ movistar sim နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကို iphone4နဲ့ IT WORKS မှာတင်လိုက်တယ်။ ယခုငါငါ၏နံပါတ်ဟောင်းကိုဆက်လက်သုံးနိုင်သည်။ မက္ကစီကိုတွင်သူတို့သည်အခြားနံပါတ်ဖြင့်အစားထိုးမထားကြသောကြောင့်အလွန်ကောင်းသောပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ytumamatambien Uppss !! ခင်ဗျားဟာစပိန်လူမျိုးဖြစ်နေလို့မင်းမက္ကဆီကိုရုပ်ရှင်ကားရဲ့နာမည်ကိုသုံးတယ်။ မင်းရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာမင်းရဲ့အဆင့်နိမ့်တဲ့အဆောက်အအုံတွေကနေလာတာမဟုတ်တော့ဘူး၊ တိုင်းပြည်ဒါမှမဟုတ်အင်ပါယာတွေကိုလုယူလို့မရတော့ဘူး။ ဝမ်းနည်းပါတယ် Huuuuuyy !! မင်းကစပိန်လိုငါမေ့လိုက်တယ်။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုရေတွက်မထားဘူး !!
ကြည့်ပါ၊ သူ့ကိုပြန်ပြောသင့်သည်၊ သို့သော်ကျွန်တော်တို့ကိုစပိန်လူမျိုးများကနေသင်ထွက်ခွာသွားသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့ထဲကတစ်ယောက်ဟာစပိန်ကိုအမိမြေလို့ခေါ်ပြီးဆက်ပြောသည်။ စပိန်ကိုဘာသာစကားတစ်ခုအဖြစ်သင်ဆက်လက်သုံးသောကြောင့်သင်၌အခွင့်အရေးမရှိပါ ဒီလိုမျိုးလူမိုက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်းစပိန်လိုပြောတတ်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအမှု၌ကျွန်ုပ်၏သဲများထည့် ၀ င်ခြင်းနှင့် Vodafone နှင့်ကျွန်ုပ်ပြောဆိုခဲ့သောမှတ်ချက်ပေးသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူ၏ micro card သည်ဆိပ်ကမ်းများ၌သေချာပေါက်လာရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့် Vodafone စတိုးဆိုင်ကိုမဆိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားသွားမည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာ။
Fabulous! အဆင်ပြေတယ်!!! ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်း ၄ မီးဖိုထဲမှထွက်လာပြီးအသံနှစ်ချောင်းဖြင့်အသံထွက် !!!
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ OK ကိုချုံ့ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမမှန်ကန်သော SIM ကိုပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် SIMYO ကိုအခြားဖုန်းတစ်ခုတောင်းခံရန်ထပ်မံကြိုးစားရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေပြီး၊ သူတို့မှာ microSIMS ရှိသည်။ !
ငါ့မှာ iphone4ရှိတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ sim card မှာတိုင်းတာမှုမရှိဘူး၊ ဒါကမသင့်တော်ဘူး
Juas၊ ကျွန်ုပ်၏ Iphone4ရောက်ရှိလာပြီး sim သည်ကျွန်ုပ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ကျွန်ုပ်သည် sangoogle တွင်ရှာဖွေပြီး panactualidadphone ကိုရှာဖွေသည်မှာအထင်ကြီးစရာပါ။
ငါ SIM ကိုရိုးရှင်းတဲ့ကတ်ကြေးများဖြင့်ဖြတ်တောက်သည်၊ ၎င်းသည် ၀ င်တော့မည်ကိုမြင်။ စစ်ဆေးနေသည်၊ ပိုလျှံမှုကိုဖြတ်ပစ်ပြီးအမှန်တရားမှာကြီးကျယ်ကြောင်း !!! ဖြတ်တောက်ထားသောဆင်းမ်ကတ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!!!
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အမေ၏ iPhone မှမိုက်ခရိုဆမ်တစ်လုံးရရှိထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ SIM ကိုအရွယ်အစားအတိအကျကိုဖြတ်တောက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအပြည့်အဝဖြတ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ငါကဒီကဒ်နှစ်ကဒ်ကိုနှစ်ခါလုပ်ပြီးပြီ၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါအတည်ပြုပြီးပြီ၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်အိုင်ဖုန်း ၄ ကအဲဒါကိုမတွေ့ဘူး iPhone ကဘာလို့လက်မခံတာလဲလို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြမလား။ ကျွန်ုပ်၏အော်ပရေတာကကျွန်ုပ်ကို microSim ကိုပေးနိုင်မလား။ (ပြောင်းရန်)
@George နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားမိတ္တူပွားတစ်ခုတောင်းခံပါကဤကိစ္စတွင် MicroSim မှ SIM ကဒ်တောင်းမည်ဆိုပါကစျေးနှုန်းမှာယူရို (၇) (စျေးကြီးမည်မဟုတ်ပါ)၊ အိမ်တွင်းနည်းစနစ်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ သငျသညျအမှုခဲ့ကြသည်ကဲ့သို့ထ။ ဒီတော့အခုသင်မှာယူရို ၇ အတွက်သင့်မှာတစ်ခုရှိတယ်
XFASSSSSSSSSS =) ကိုငါယူစရာမလိုဘူးဆိုတာတစ်စုံတစ်ယောက်က MICROSIM ကတ်၏တိကျသောတိုင်းတာမှုများသိသည်။
ငါကဒ်ဖြတ်ပြီးပြီ။ iPhone4ကအသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
@daft အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာသုံးလကြာအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်မရဲ့ SIM က ၁၀ နှစ်ကျော်တဲ့ပထမဆုံး Movistar လိုဂိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။
heo but and that ပေမယ် iphone4ကယူလာရမယ်
မင်း telceeel sim နဲ့ရမလား?
ကျွန်ုပ်တွင် Orange USB modem (လက်တော့ပ်များအတွက်အင်တာနက်) ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းမှာ ၄ င်းတို့ကိုစျေးကွက်အတွင်းရောင်းချသောစက်အနည်းငယ်ဖြင့်ဖြတ်နိုင်သလား။ ပြီးတော့ကျွန်တော့် iPad 3G မှာထည့်လိုက်
အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏အော်ပရေတာကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သည် (Telcel Signal)
x သူတို့ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ haha ​​ငါဘယ်လောက်ရောင်းမလဲဆိုတာမသိဘူး
ဟယ်လို! လက်ရှိတွင် ipad နှင့် iphone4သာ microsim ကိုသုံးသည်ဆိုပါစို့။ ဒါမှမဟုတ်အခြားဖုန်းတံဆိပ်တွေကလည်းသုံးတာလား။
hesperia T က၎င်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်
ငါမှာ NOKIA Lumia 710 ရှိပြီး microsim ရှိတယ် ... NOKIA Lumia အားလုံးထင်တယ် (:
သငျသညျပုံထဲမှာပေါ်သောအရာကိုထက်အများကြီးပိုမရှိဘဲဖြတ်ဖို့ရှိသည်, သင်ရုံ chip ကိုစွန့်ခွာရန်ရှိသည် !!
သတိထားပါ၊ ipad နှင့်အသုံးပြုရန် sim ကိုဖြတ်ပြီး၎င်းကိုမထုတ်နိုင်ပါ။ ငါ ipad ကိုတရား ၀ င်ပန်းသီး ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့ပို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊
သို့သော်ယင်းတို့ကိုလှည့်ဖြား။ သတိထားပါ၊ SIM ကိုဖြတ်တောက်သည့်အခါအလွန်သတိထားပါ
အလက်ဂျန်ဒရို ဘာဇီ၊ ဟုသူကပြောသည်
ငါ sim ဝယ်လိုက်သည်။ အရွယ်အစားအတိအကျကိုဖြတ်လိုက်သည်။ ကောင်းစွာသွားသည်။ ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်ဟုဖတ်သော်လည်း i pad ကကျွန်ုပ်အားပြောပါသည် - ဆယ်လူလာဒေတာကွန်ယက်ကိုမဖွင့်နိုင် ငါ Movistar နှင့်စကားပြောသူတို့ခွင့်မပြုပါဘူး။ သူတို့သည်ခွင့်မပြုပါ။ SIM ကဒ်ဝယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်သွားမည်ဟုသင်၏ယုံကြည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသောဘောလုံး။ သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသုံးမကျအကြံပြုချက်ယုံကြည်စိတ်ချသောငါတို့အဘို့, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
alejandro barzi အားပြန်ပြောပါ
ငါကဖြတ်ပြီးပြီ။ ငါအတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ငါ geve ကိုသုံးနေချိန်မှာငါအကြံပေးချင်တယ်။ microsim အရမ်းပြင်းထန်လာတယ်။ ဒါကြောင့်လက်သည်းခွံကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တောက်တဲ့အခါငါလှည့်စားခဲ့တယ်။ မိုက်ကရိုဆမ်ကိုပါးနပ်စေပြီးဖြုန်းတီးစေတယ်။ ဟွန်ဒူးရပ်စ်ကမင်းလိုကုမ္ပဏီမျိုးမှာသူတို့ကကျွန်တော့်ကို microsim ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကပိုမြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့သင်တန်းကိုမဖြတ်ခဲ့ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြောင့်ငါ sim ကိုဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ was ပြီးတော့ငါကတ်ကြေးနဲ့အတူမျက်စိကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ၊ မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပါပဲ!
betuel de la Cruz Jimenez ဟုသူကပြောသည်
micro__ ချစ်ပ်သို့ကူးပြောင်းလိုက်သော chip သည် iphone4တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်
betuel de la cruz jimenez အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
iphone4ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် chip ကို micro chip နဲ့ solution တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလည်း sim ကိုပြproblemsနာမရှိဘဲဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ လေးစားပါတယ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ အမှန်ပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခရောက်နေသည်၊ sim ကို ဖြတ်၍ motorola razr ၌ထားပါ၊ လာပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မရှာနိုင်ပါ၊ ဖုန်းသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအလုပ်မလုပ်ပါ ငါ့ကိုပေးဖို့မဆိုအကူအညီ, ထိုသူကပြောတယ်ကဒ်ကိုဘယ်လိုရဖို့! !!!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်စာရွက်စာတမ်းပုံတစ်ပုံကိုတင်ပေးပါကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးသောအရာဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံး EEEEEE သည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ဂျိုးလ် ရိုမီယို ဟုသူကပြောသည်
super + cenciyo နည်းလမ်းသည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ သွား၍ သင်၏ sim ပြန်လည်နေရာချထားရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်သင်ခေါင်းဖြတ်ခြင်း၊ နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း၊ သင်၏သူငယ်ချင်း cocofox ကိုမက္ကဆီကိုမှချိုးဖျက်နိုင်သည်။
joel romero အားပြန်ပြောပါ
အခိုင်အမာသဘောတူသည်… ..but ကားရောင်းသူမှရယူခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်။ ထိုအခါငါကသူရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားနေတယျ
CS II ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့ .. အားဖြင့်အစီအစဉ်ကိုပျက်စီးလျှင်ငါတို့သည်အစားထိုးများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုသွားပါ
cs II ကိုပြန်ကြားပါ
francisco အယ်လန် ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်သံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်ကတ်ကြေးတစ်စုံနှင့်ပိုမိုရိုးရှင်းသည်၊ သာမန် Mini ၏အရွယ်အစားကိုမြင်ရုံသာဖြစ်သည်။
francisco allan မှပြန်လည်ပြောကြားခြင်း
tovir ပါ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြaနာရှိနေတယ်၊ ​​အဲဒါဟာပြတ်တောက်သွားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်၊ ငါ့ရဲ့ iPhone4ရဲ့ microchip ရဲ့လတ္တီတွဒ်လိမ်လွင့်သွားတယ်၊ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
L ကိုတုတ် ဟုသူကပြောသည်
တိကျသော Tools များ hahahaha
L Porras ကိုပြန်ပြောပါ
micro-chip ကိုဖြတ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ BB Z10 တွင်သုံးနိုင်ရန်ဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်သောဘုံချစ်ပ်မှအဆက်အသွယ်များကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်ကိုမည်သူမဆိုသိပါသလား ???? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ING ။ Victor Manuel LOPEZ OVANDO ဟုသူကပြောသည်
ငါ telcel ကနေ motorola 3g xt1032 ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ သူကမိုက်ခရိုချစ်ပ်လို့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ နံပါတ်အတွက်ပုံမှန် standard chip ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်။ adapter ကိုရှာတယ်။ ရှာမတွေ့ဘူး။ ချစ်ပ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် microsim ၏အရွယ်အစားကိုရှာဖွေရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး flexometer ၏အကူအညီဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမှတ်အသားသည် microsim ၏တိုင်းတာမှုကိုခံယူပြီးစံ sim နှင့်အမှတ်အသားအားလုံးရှိသည့်ဖြတ်ထားသောစူပါကတ်ကြေးများအကူအညီဖြင့်အမှတ်အသားပြုသည်။ ၎င်းကိုတိကျမှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုတို့ဖြင့်ပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ING ကိုစာပြန်ပါ။ Victor Manuel LOPEZ OVANDO
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို !!! ငါတကယ်အိုင်တီတန်ဖိုးထား !!! ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များကိုလိုအပ်ခဲ့ပြီး၊ အခြားအသေးစား ၀ ယ်ယူရန်လည်းလိုအပ်သည်။ သို့သော်ဤအရာကိုငါမြင်ပြီး၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ သော့ချက် IS ။
ငါ့ရဲ့ချစ်ပ်ကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ ငါ့ iphone အက်ပလီကေးရှင်းမှာအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာပြောပြနိုင်တယ်
Netflix သည် VPN ဆက်သွယ်မှုများကိုစစ်ဆင်နွှဲသည်
ကွေးကောက်ဒီဇိုင်းနှင့်5လက်မအရွယ် iPhone 4se ၏ပုံရိပ်သစ်